Nei makumbo angu ekatsi katsi achitadza | Noti Katsi
Nei makumbo angu ekatsi katsi ari kutadza? Ichokwadi ndechekuti kunyangwe kushamisika izvo zviri kunetsekana, nekuti zvinoreva kuti chimwe chinhu chakanganisika neshamwari yako yepamoyo ine hutsi uye kuti anoda rubatsiro nekukurumidza.
Uine izvi mupfungwa, tichaenda kukuudza izvo zvinogona kukonzeresa uye kurapwa kwavo kuitira kuti, nenzira iyi, iwe uzive kubatsira katsi yako.
1 Ndezvipi zvikonzero?
1.2 chirwere cheshuga
1.4 Kupora kusingaperi
1.6 Zvimwe zvinokonzeresa
3 Nei katsi yangu ichifamba zvisina kujairika
3.1 Ataxia: iyo yekudzedzereka chirwere
3.2 Claudication: Kukamhina kana kukamhina
4 Chii chekuita kana kati yangu ichifamba zvisina kujairika?
Kuona kati yako ine matambudziko ekufamba hakufadzi. Paanosvika pane ino mamiriro, anoshandisa yakawanda yezuva akarara mukona, asina hanya. Kuti ikubatsire kuve nani, chinhu chekutanga kuita kuziva chikonzero chechirwere chako:
Izvo zvinoitika kana mhasuru yemoyo ichikora, nokudaro zvichikonzera matambudziko emwoyo. Saka kana zvikamu zvakasiyana zvemuviri, zvinosanganisira makumbo ekumashure uye muswe, zvikarega kugamuchira ropa rakaringana, zvinotanga kupera simba.
Kana katsi ine shuga yakawanda yeropa, iyo potasium inodonha nekuti inowedzerwa kakawanda. Aya madonhwe e potassium kukonzera neuropathies iyo inogona kutungamira kumatambudziko ekufamba.
Kunyangwe ichinyanya kuwanikwa muimbwa, hudyu dysplasia inogona zvakare kutambura nekatsi; kunyangwe mune felines kazhinji inogara nhaka. Zvinoitika kana mapfupa ehudyu neechikadzi asina kukura zvakanaka, ichivakonzera kurwadziwa, vakaremara makumbo ekumashure, kunetseka kumhanya kana kusvetuka, uye kukwenya.
Kuzvimbirwa kusingaperi kunokonzerwa zvakanyanya ne kukundikana kwemeno zvinogona kutungamira kuzviratidzo senge kubvunda kwemakumbo ekumashure uye kunetseka kufamba zvakanaka. Uye zvakare, zvimwe zvinowanzoitika sekushayikwa kwechido uye / kana huremu uye kurutsa.
Iro ropa rinovhara iro rambogara mune chimwe chikamu chemuviri. Kana ikaitika neshure, ropa harizosvika pamakumbo aro zvakanaka, zvekuti vanozotonhora uye nekufamba kushoma.
Isu takaona zvakajairika, asi kune zvimwe zvatisingagoni kukanganwa:
FIV, kana feline immunodeficiency virus
FIP, kana feline inotapukira peritonitis
Ehe saizvozvo, enda naye kuna chiremba. Pane imwe nguva aripo, achaita bvunzo dzepanyama, uye anogona kuraira X-ray kana imwe bvunzo yekufungidzira kuti uone chaizvo zvakakanganisika newe.
Ipapo, anoenderera mberi achikupa iwe mishonga inozorerutsa (kana kuporesa, zvinoenderana nenyaya) zviratidzo. Kana chauinacho chikatsemuka, unogona kusarudza kuvhiiwa kuti ugadzirise, uye kusunga bhandeji.
Uye zvakare kumba unofanira kumupa rudo rwakawanda, ave nechokwadi chekuti anodya nekunwa zvakanaka, uye kuti anonzwa kugadzikana.
Nei katsi yangu ichifamba zvisina kujairika
Pamwe waona kuti katsi yako inofamba zvisinganzwisisike, pamwe hazvirevi kuti makumbo ake ekumashure ari kukundikana, asi kuti paunomuona achifamba unenge uchiona kuti pane chakaipa.
Ipapo Tichazotaura newe nezve zvimwe zvezvirwere zvakajairika zvinokanganisa kufamba kwekatsi. Ndidzo hosha dzaunogona kuona neziso rakashama, pamwe makumbo ake ekumashure anokundikana, anodzedzereka, anonetseka kusimuka ...
Kana izvi zvikaitika uchafanirwa kuenda nekatsi yako kun'anga, asi zvakakoshawo kuti uzive zvinogona kunge zvichiitika kwaari.
Ataxia: iyo yekudzedzereka chirwere
Kana izvi zvikaitika kukatsi yako, unogona kumutora kuenda kun'anga achinetseka kuti feline inoita kunge ine dzungu. Ataxia chirwere chinokanganisa kufambisa kwese kufamba kwekatsi. Icho hachisi chaicho chirwere asi chiratidzo chekumwe kukuvara kana kukanganisa muuropi izvo zvakanangana zvakananga nekufamba. Inogona kuve yekuzvarwa.
Saka iko kusagadzikana kwehurongwa hwemitsipa uye kitsi dzine shanduko mukubatana kwetsandanyama, kunyanya kumagumo. Kune mhando dzakasiyana dze ataxia:
Cerebellar ataxia. Iyo katsi ine kuomarara mucerebellum (nzvimbo iyo muyero uye kubatana kwemafambiro kunodzorwa).
Vestibular ataxia. Kune matambudziko munzeve yemukati kana mutsinga dzinoenda kubva munzeve kuenda kuuropi. Katsi dzinogona kutenderedza misoro yavo uye kufambisa maziso avo zvinoshamisa. Vanogona kufamba mumadenderedzwa kana kudivi. Vanogona kunyange kunzwa mamita uye kurutsa.
Kunzwa ataxia. Izvo zvinoitika kana paine matambudziko muuropi, musana uye / kana periiperi tsinga dzinove nebasa rekubatanidza mativi nehuropi. Iyo katsi inogona kufamba nemakumbo ayo akapararira zvakanyanya.
Claudication: Kukamhina kana kukamhina
Izvo zvisina kujairika kana uchifamba mukitsi uye zvakare unozviratidza kana kati isingatadze kusvetukira kumatunhu akakwirira. Mamiriro akajairika ndeaya atinokurukura pazasi.
Kukuvara kwetsoka. Unogona kuva nekukuvara kumapedhi.
Kukuvara kwepfupa. Inogona kukonzerwa nedambudziko rekuverenga.
Kukuvara pamwe chete. Ivo vanowanzo kuputira.
Tsandanyama musiyano kana shanduko.
Kuchinja kwehutano sevhitamini A yakawandisa
Chii chekuita kana kati yangu ichifamba zvisina kujairika?
Tevere isu tichaenda kunotaura pane mamwe mapoinzi iwe aunogona kuita kana katsi yako ikafamba zvinoshamisa uye iwe usingazive zvingave zviri kuitika kwaari
Tsvaga kuna vet. Chinhu chekutanga chekuita kutaura nachiremba wako uye tsanangura zviri kuitika kune wako feline.
Tarisa uone chero zviratidzo. Cherekedza kumira kwekatsi yako, kufamba, kana kufamba kuti uone kuti hapana zvakashata.
Chipikiri kuzvidzora. Dzivisa kukuvara kumapedhi sezvo nzara dzako dzinogona kukura zvisina kunaka uye kuchera mupad.
Dzivisa kukuvara kwetsoka. Izvo zvakakosha kuti iwe utarisire katsi yako uye uvadzivirire kubva pakutambura kushungurudzika kune avo mapedhi. Kunze kwekudzivirira tsaona dzerudzi rupi zvadzo. Iyo katsi iri nani kuenda kunze kwemusha zvishoma sezvinobvira.
Chero nzira, kunyangwe iwe uchifunga kuti kati yako iri kufamba zvisinganzwisisike kana ine nhanho dzemakumbo ekumashure, unofanirwa kubvunza vet yako kuitira kuti vakwanise kuongorora hutano nekukurumidza. Vachakupa kunyatsoongorora zviri kuitika kwauri.
Mune zvimwe zviitiko, kutsvaga kwekutanga kwakakosha kudzivirira matambudziko etsinga dzerudzi chero rupi zvaro, kana matambudziko echisimba.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Noti katsi » Katsi » Zvirwere » Nei makumbo angu ekatsi katsi ari kutadza?